‘अरुहरुले जिते माननीय, मैले जिते प्रधानमन्त्री’ : देउवा | Jukson
‘अरुहरुले जिते माननीय, मैले जिते प्रधानमन्त्री’ : देउवा
‘म प्रधानमन्त्री बन्ने नबन्ने भन्ने कुरा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीमा भर पर्छ’ नेपालखबरसँगको अन्तर्वार्तामा मंगलबार (२८ कार्तिक) कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भनेका थिए, ‘पार्टीलाई चुनाव जिताउने सजिलो बाटो मलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्नु हो जस्तो लाग्छ।’
चुनाव अभियानका क्रममा गृहजिल्ला डडेलधुरा पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले भने आगामी निर्वाचनपछि पनि कांग्रेसबाट आफू नै प्रधानमन्त्री हुने घोषणा गरेका छन्। चुनावी प्रचार अभियानका क्रममा विहीबार सदरमुकाम अमरगढीमा आयोजित सभामा देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा एक पटक होइन, तीन पटक दोहोर्‍याए।
एमाले–माओवादी केन्द्रको वामगठबन्धनबाट कडा चुनौति सामना गरिरहेका देउवाले भने, ‘अरुले जिते भने माननीयमात्र होलान्। मैले जितेँ भने प्रधानमन्त्री भइरहने हो। म प्रधानमन्त्री भएपछि यो गर, उ गर भन्न सक्नुहुन्छ। अरुलाई के भन्न सक्नुहुन्छ?’ उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सक्ने हो कि माननीयलाई भन्न सक्ने हो?’
‘आफूले जिते प्रधानमन्त्री’ भन्ने कुरा तीनपटक दोहोर्‍याएका देउवाले आफ्ना कारण डडेलधुराको नाम नेपालमा मात्र होइन, विश्वमा नै पुगेको दावी गरे। ‘पहिले डडेलधुराको नाम नेपालमा पनि थिएन’ देउवाले भने, ‘तपाईंहरुको सहयोगले म देशको प्रधानमन्त्री पनि हुन पाएँ। गाउँ र जिल्लाको नाम नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा पनि फैलाउन पाएँ।’
यति भन्दै देउवाले थपे, ‘अस्ति म अमेरिका गएको थिएँ। त्यहाँपनि डडेलधुराबाट जितेको होइन? भनेर सोधे।’ यति भन्दै उनले डडेलधुरावासीसँग भने, ‘मैले डडेलधुराको नाम बदनाम हुन दिएको छैन। बरु नाम बढाएको छु। मलाई गर्व छ, डडेलधुराका जनताहरुले मलाई सहयोग गरेकोमा। यहाँहरुकै कृपाले म यो देशको प्रधानमन्त्री हुन पाएँ।’
मत माग्न गृहजिल्ला पुगेका देउवाले सम्बोधनको सुरुमै डडेलधुरावासीलाई रोजगारी र विकास निर्माणको आश्वासन दिने योजनामा रहेछन्। जव उनको सम्बोधन सुरु भयो, उनलाई के लागेछ भने, कतै माइकले काम पो गरिरहेको छैन कि! आफूले भन्न खोजेको कुरा आमसभाका सहभागीले नसुन्ने हुन् कि! त्यसैले सम्बोधन सुरु गर्नासाथ उनी पछाडि फर्के। र, ‘माइकले काम गरिरहेको छ कि छैन? सोधे।
सहयोगीले 'काम गरिरहेको छ' भन्ने उत्तर दिए। तर देउवा विश्वस्त हुन सकेनन्। त्यसैले, ‘मास’सँग प्रश्न गरे, ‘सुनिएको छ?’ उनले बोलेको सुनिएको जवाफ ‘मास’ बाट आएपछि फेरि उनी फेरि एकपटक ‘कन्फर्म’ हुन खोजे, ‘सुनिएको छ नि राम्रोसँग? सुनिएको छ है!’
आफ्ना कुरा आमसभामा आएका सर्वसाधारणले सुनेका छन् भन्ने जव ‘कन्फर्म’ भयो, देउवा बोल्न थाले। उनले भने, ‘म पहिले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि महाकाली सन्धि गरेको थिएँ, अहिले भारत जाँदा पञ्चेश्वरलाई अघि बढाउने सहमति भएको छ। छिट्टै नै पानीको बाडफाँट, विजुलीको बाँडफाँटका लागि भारतबाट टोली आउँदैछ। त्यो टोलीले अन्तिम सम्झौता गरेपछि पञ्चेश्वर योजना सुरु हुन्छ।’
पश्चिम सेतीमा चिनियाहरुले काम गर्न चाहेको बताउँदै देउवाले पश्चिम सेती र पञ्चेश्वर योजना बनेपछि डडेलधुराको मात्र होइन, समग्र नेपालकै बेरोजगारी समाप्त हुने बताए। बजेट ल्याउन नपाउँदा केही महत्वपूर्ण घोषणा गर्न नसकेको दावीपनि गरे। उनले भने, ‘यसपालि मैले बजेट ल्याउन पाइन। ल्याउन पाएको भए बेरोजगार भत्ता दिन चाहन्थेँ। जेष्ठ नागरिकको भत्तापनि बढाउने हो।’
सम्बोधनका क्रममा डडेलधुराबाट सिधै भारत पस्ने बाटो बनाउने आश्वासन दिनपनि भ्याए उनले। ‘यहाँबाट अब महेन्द्रनगर, धनगडी बनबासा भएर भारत जानुपर्दैन’ चुनावीसभा न हो, देउवाले भाषण ठोके, ‘सिधै जोगबुडाबाट भारत जाने बाटो बनाउने हो। यसबारेमा भारतका प्रधानमन्त्रीसँग मेरो कुरा भएको छ। सम्झौता भएको छ।’
बीचमा उनले फेरि डडेलधुरावासीले पटक पटक जिताएकोप्रति आफू कृतज्ञ भएको सुनाए। ‘के धन्यवाद दिऊँ तपाईंहरुलाई!’ उनले भने, ‘यति धेरै सहयोग गर्नुभएको छ।’ यति भन्दै देउवाले वामगठबन्धनविरुद्ध प्रहार सुरु गरे। सुरुवातमा नै उनले भने, ‘कम्युनिष्टहरुको गठबन्धन जो भएको छ, यो प्रजातन्त्रको विरुद्धमा भएको छ।’
केही दिन अघि देउवाले ‘कम्युनिष्ट शासनमा रुनपनि पाइँदैन’ भनेका थिए। देउवाको यो अभिव्यक्ति राजनीतिक बृत्तमा उनीप्रति खिसिट्युरी गर्ने विषय बनेको थियो। वामगठबन्धनका नेताहरुले ‘कांग्रेसको शासनमा हाँस्न पाइँदैन’ भन्ने जवाफ दिएका थिए। देउवाले डडेलधुरा पुगेका देउवा डडेलधुराले आफ्नो भनाईलाई थोरै संसोधन गर्दै भने, ‘कम्युनिष्ट शासनमा हाँस्ने अधिकार हुँदैन। डर त्रासको शासन हुन्छ।’
त्यसपछि उनले रुस र चीनको शासनको प्रसङ्ग ल्याए। ‘रुसमा लेनिनको शालिक ढलिसक्यो, जनताले ढलाए, चीन माओको साटो ल्यू साओचीमा आइसक्यो’ देउवाले दावी गरे, ‘रुसमा लेनिनवाद छैन, चीनमा माओवाद छैन, नेपालमा चाहिँ लेनिनबाद–माओबाद भनेका छन्।’
भारतीय नायिका सोनालीलाई ‘हाई ग्रेड’ क्यान्सर !